झण्डै ७० प्रतिशत मत ल्याएर फेकनमा जितेकी दीपाले अब के गर्लिन् ? – RealPati.com
काठमाडौं । कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको छाता संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को शनिबार सम्पन्न १० औं साधारणसभा तथा निर्वाचनमा चर्चाको शिखरमा रहिन् दीपा लामिछाने ।
उनी यसरी एकाएक चर्चामा आउनुको कारण उनको लोकप्रियता नै हो । १ सय ६९ मत खसेकोमा उनले झण्डै ७० प्रतिशत अर्थात् १ सय १३ मत ल्याएर आफूलाई उत्कृष्ट सावित गरिन् । थोरैमात्र बोल्ने र सबैसँग मिलनसार व्यवहारका कारण नै उनले यो सफलता पाएकी हुन् । ‘मलाई सबै व्यवसायी साथीहरुले पत्याउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो त्यस्तै पनि भयो, योभन्दा अरु खुशी हुने ठाउँ छैन’ उनले भनिन् ‘मैले निर्वाचनमा जाँदा जे प्रतिबद्धता गरेको छु, त्यो पूरा गरेर देखाउने छु ।’ उनले अब महिलाहरु पनि सक्षम भइसकेकाले प्रत्येक ठाउँमा अवसरको मात्र खाँचो रहेको समेत स्पष्ट पारिन् । निर्वाचनले दुई वर्षका लागि बासुदेव नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
फोर स्टेप्स कन्सल्टेन्सीकी प्रवन्ध निर्देशक रहेकी उनले व्यवसायमा देखिएका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको बताएकी छिन् । कोरोना भाइरसका कारण व्यवसायीले भोगेको समस्यालाई कसरी निकास दिने भन्नेमा उनी चिन्तित छिन् । १५ वर्षअघिदेखि यो क्षेत्रमा लागेर आफूलाई स्थापित गराउँदै लगेकी उनले पाएको नयाँ जिम्मेवारीले केही नयाँ काम गरेर देखाउँछु भन्ने सोचेकी छिन् । शैक्षिक अध्ययनको लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई अध्ययनका क्रममा परेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु पनि एउटा चुनौती रहेको बताइन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, यूके, यूएस्ए, साउथ कोरियालगायतका देशसँग राम्रो सम्वन्ध स्थापित गरेकी उनले विद्यार्थीको थप अध्ययनका लागि नयाँ गन्तव्य पनि खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
दीपा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीमात्र पनि होइनन् । उनको अर्को लुकेको पाटो हो समाजसेवा पनि । ‘मलाई समाजसेवा गर्न मन छ, जसबाट मैले आत्म सन्तुष्टि पाएकी छु’ उनले भनिन् ‘ समाजमा समस्यामा परेकालाई मैले राहत र उद्धार गरेकी छु ।’ उनले आश्रय गृह सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्, त्यसकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनले बालबालिका, बृद्धबृद्धा र महिलाको पक्षमा काम गर्दै आएकी छिन् । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण मानिसमा मानसिक र व्यवहारिक समस्या परेका बेला उनले काउन्सिलिङ समेत गराएकी थिइन् ।
‘म कन्सल्टेन्सी व्यवसायसँगै सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर छु र रहिरहन चाहन्छु’ उनले भनिन् ‘ मुख्य कुरा व्यवसायी साथीहरुको हकहितमा समय खर्चन्छु र बचेको समय समाजसेवामा लगाउँछु ।’
सावधान ! आँखाले दिन्छन् यी ७ गम्भीर रोगको संकेत